यी ४ राशी भएका युवतीहरुले छिट्टै आकर्षित गर्छन् पुरुषलाई ! कुन कुन हुन् ती राशी ? – MediaNP
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००७:२०0
काठमाडौँ । ज्योतिषी शास्त्रका अनुसार हरेक महिलाहरुको आफ्नो राशीले पनि पुरुषहरुको आकर्षणमा प्रभाव पार्दछ । त्यसमध्ये कुनै युवतीहरुको खराब राशीले पुरुषसँग झगडा र मनमुटाव मात्रै हुने गर्छ । तर कुनै युवतीहरुको राशीले प्रेम सम्बन्ध मात्रै नभएर जीवन नै उज्याले बनाइदिन्छ । आज हामी त्यस्तै ४ राशीको बारेमा कुरा गर्दै छौ । जुन राशी भएका युवतीहरुले पुरुषहरुलाई छिट्टै मोहित पार्दछन् । कुन कुन हुन् ती राशी ?हेरौ
वृश्चिक राशी भएका युवतीहरुसँग धेरै पुरुषहरु आकर्षित हुन्छन् । किनभने यो राशी भएका युवतीहरु सुन्दर , मिठो बोलीचाली र व्यवहार भएकाले जो कोहीलाई पनि सजिलै आकर्षित गर्न सक्छन् ।
मिन राशी भएका युवतीहरु पनि धेरै राम्रो र रमाइलो स्वभावको भएकाले यो राशी भएका युवतीहरु भनेपछि पुरुषहरु मरहित्ते नै गर्छन् । यस राशी भएका युवतीहरु दिमाखमा पनि त्रीष्ण र व्यवहारमा पनि परिपक्क हुन्छन् ।
धेरै पुरुषहरु मिथुन राशी भएका युवतीहरुसँग प्रेम सम्बन्धमा बाधिँन चाहन्छन् । किनभने यो राशी भएका युवतीहरु पुरुषलाई आफ्नो बानी व्यवहोरा र सुन्दरताले छिट्टै वसमा ल्याउन सक्ने क्षमता भएका हुन्छन् । त्यस्तै बोलीचालीमा पनि निकै मायालु स्वभावका हुन्छन् ।
समाजमा मानिसहरुले वृष राशी भएको बुहारी भित्र्याउनुलाई देवी भित्रए समान मान्दछन् । किनभने यो राशी भएका युवतीहरु परिवार र समाजमा घुलमिल हुन सक्ने हुन्छन् । त्यस्तै जस्तो सुकै दुखमा पनि साथ दिने भएकाले पुरुषहरु वृश राशी भनेपछि मरिहत्ते हुन्छन् ।
पिएचडी होल्डरको अनौठो जुक्ति ! जुन देखेर तपाईले हाँसो रोक्न सक्नुहुने छैन्, हेर्नुहोस् (तस्वीर सहित)